यी चर्चित नेपाली अभिनेताका श्रीमतीहरु को के गर्छन त ? |
यी चर्चित नेपाली अभिनेताका श्रीमतीहरु को के गर्छन त ?
२०७५, २९ बैशाख शनिबार ००:०८ May 12, 2018 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौँ : नेपाली सिनेमामा स्थापीत अभिनेताका परिवारका सदस्यहरुको सिनेमामा प्रबेश त्यति धेरै छैन । जति छ त्यसमा पनि भाई ,छोरो,छोरी, लगाएतका नातेदारहरुको प्रबेश देखिन्छ । केहि अभिनेताका श्रीमान श्रीमती भने यो क्षेत्रमा स्थापीत नाम हरु हुन । अभिनेता हरिहर शर्मा कि श्रीमती सकुन्तला शर्मा अभिनेता भुवन केसीकि पूर्व श्रीमती सुस्मिता बम्जन , श्री कृष्ण श्रेष्ठकि श्रीमती स्वेता खडका, निखिल उप्रेतीकि दोश्रो श्रीमती संचिता लुईटेल र अभिनेता एबं निर्देशक स्वस्तिमा खडकालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । तर यी बाहेक सिनेमामा स्थापीत रचर्चित केहि अभिनेताका श्रीमतीहरु भने फरक पेसा र क्षेत्रमा छन । आज हामीले केहि स्थापीत अभिनेताका श्रमितीका बारेमा चर्चा गर्दै छौ ।
दर्पण छायाँ, बादल पारी, ए मेरो हजुर, लक्ष्मण रेखा, निखिल दाई, जोड िनम्बर एक लगायतका सिनेमामाकाम गरेका अभिनेता दिलिप रायमाझीले नेपाली सिने उद्योगका लागि दर्जनौ सफल फिल्महरु दिएका छन् । दिलिप रायमाझी यतिबेला भने स–परिवार अमेरिकामा छन् । दिलिपकी ,श्रीमती मन्जु रायमाझी हाउसवाईफ हुन् ।दिलिप र मन्जुकी एक छोरी छिन् – दिव्या । दिव्यालाई केहि निर्देशक र निर्माताले फिल्ममा ब्रेक दिन चाहेको समाचारले गत वर्ष खुबै चर्चा पाएको थियो ।
अभिनेता निखिल उप्रेतीले जीवनमा दुई पटक विवाह गरे । कोपिला निखिलकी पहिलो श्रमिती हुन् । निखिलले पहिलो श्रीमती हुँदा हुँदै सम्बन्ध बिच्छेद नगरिकनै अभिनेत्री संचिता लुईँटेललाई विवाह गरेका थिए । निखिलकी पहिलो श्रीमती कोृपिलासंग अहिले पनि सम्बन्ध बिच्छेद भएको छैन । जानकारी अनुसार निखिल दुवै श्रीमतीसंग समय मिलाएर बस्छन् । कोपिलाले झण्डै डेढ वर्ष जति गोपी कृष्ण टि भि फिल्मीको रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालिकाको रुपमा काम गरिन् । तर पछि छोरा पे्टमा आएपछि उनले त्यो काम छाड्नि । अहिले भने उनी छोरा र घरको हेरविचारमै ब्यस्त छिन् । निखिलकी दोस्रो ,श्रीमती संचिता भने छोराछोरी हुर्काएर फेरि सिनेमामा फर्किएकी छिन् । यतिबेला उनी सिनेमा लिलाको प्रचार प्रसारमा व्यस्त छिन् ।
साल बैशाख ६ गते विवाह बन्धनमा बाँधिएको जोडी हो सपना भण्डारी र आर्यन सिग्देलको । सपनासँगको प्रेमले टुसा हाल्दा आर्यन भर्खर आफ्नो करियरबाट सफलता हात पार्दै थिए । एकअर्कालाई नभेटिकनै प्रेम गरेका यी दुईले एकअर्काको काम र व्यस्ततालाई राम्ररी बुझेका छन् । आर्यन अभिनयमा अब्बल छन् भने सपना अध्ययनमा । सपना हाल मानविकी बिषयमा मास्टरस् सकाएर बसेकी छिन् । सपना आधिकारिक रुपमा कुनै अफिससँग जोडिएकी छैनन् । तर उनी आफूलाई हाउसवाईफ भन्न पनि खासै रुचाउँदिनन् । सपना नेपाली अभिनेताका श्रीमतीहरुमा फेशनेवल मानिन्छिन् ।
दयाहाङ राईका लागि श्रीमती साथी र घर हुन् । गायिका बेनुका राईले दयालाई त्यसबखत साथ दिएकी थिईन् जब उनी सफल अभिनेता बन्ने दौड दौडीरहेका थिए । दयाको करियर सफल बनाउन बेनुकाले आफ्नो व्यावसायिक गायन पेशाबाट बिदा लिईन् । दयासँग भेट हुँदा बेनुका व्यवसायिक गायिका बनिसकेकी थिईन् । तर उनले त्यो कुरालाई बिर्सेर दयाको करियरलाई आफ्नो करियर मानेर अघि बढिन् ।
उनले व्यवसायिक गायिका बन्नु भन्दा एकेडेमीक गायिका बन्छु भनेर गायन छाडेकी थिईन् । लामो समयको चिनजान र प्रेम पछि उनीहरुको प्रेम विवाह भएको हो । दयाहाङका शब्द रहेका केही गीतमा बेनुकाले आफ्नो स्वर दिएकी छिन् । हाल बेनुका छोरा साम्दुङहाङ ९जसको अर्थ नेपालीमा आर्शिवाद हुन्छ० र घर सम्हालेर बसेकी छिन् ।